ओलीले फेरे नेपाललाई रिस, हटाएर सबै जिम्मेवारीबाट अब नेपाल कता ! – Suchana Sanjal
ओलीले फेरे नेपाललाई रिस, हटाएर सबै जिम्मेवारीबाट अब नेपाल कता !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७७ समय: २०:०८:०८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका समुहका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका छन् ।
अदालतका फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि ओली तिर लागेका नेपाल यति बेला ठुलो संकटमा परेका छन् ।
आज बैठक नै नबसी नेपाल समुहका नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका हुन् । ओलीले महासचिव ईश्वर पोखरेलको पदाधिकारी पद बाहेक सबै पद खारेज गरेका छन् ।
युवराज ज्ञवालीलाई हटाएर कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा यमलाल कँडेललाई र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जबाट भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।प्रदेश–१ को इन्चार्जमा ओली निकट सुवासचन्द्र नेम्वाङ चयन भएका छन् ।
नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आउँदो मंसिरमा हुने निश्चित,काठमाडौं २८ फागुन । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आउँदो मंसिरमा हुने भएको छ ।
आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरुको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा यस्तो निणर्य गरिएको हो । आउँदो २ देखि ६ गतेसम्म लागि दशौं महाधिवेशनको मिति तय गरिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आज बसेको बैठकले पार्टीको महासचिवबाहेक माधव नेपाल समुहका सबै नेताहरुको जिम्मेवारी समेत खोसेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् काठमाडौँ, २८ फागुन ९कमलपोखरी पुनःनिर्माणको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । अहिले पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न गरी पोखरी वरपर सौन्दर्यको काम भइरहेको छ ।
आगामी एक महिनाभित्र सबै सक्नेगरी पुनःनिर्माणको काम भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी गराएको छ ।
सौन्दर्यको कामसँगै काठको केही कलात्मक बुट्टा कुँद्ने काम पनि भइरहेको कामपा भौतिक पुर्वाधार महाशाखा प्रमुख राम थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अबको केही दिनभित्र पोखरीमा पानी राखिन्छ । पुनःनिर्माणपछिको शुरुआती चरणमा एक लाख लिटर पानी भर्ने योजना छ ।
सम्पदा पुनःनिर्माणलाई पर्यटनसँग जोडेर दिगो व्यवस्थापनमा कामपाको ध्यान केन्द्रित भएकाले अनावश्यक भ्रम सिर्जना नगर्न सबैमा आग्रह गरिएको छ । एक वर्षभित्र सक्ने गरी अघिल्लो असार १९ गते कमलपोखरी पुनःनिर्माणका लागि शिलान्यास भएको थियो ।
उद्यान अपाङ्गमैत्री हुनेछ भने बीचमा पानीको फोहोरा हुनेछ । पोखरीको चारै कुनामा कमल रोप्नका लागि साना–साना पोखरी बनाइनेछन् ।
आगन्तुकलाई बस्नका लागि चौतारा पनि निर्माण गरिनेछन् । वरिपरि बिजुली जडान गरेर झिलीमिली पारिनेछ ।
त्यहाँ खुला व्यायाम गर्ने ठाउँ, ब्याडमिन्टन र बास्केटबल खेल्ने ठाउँ हुनेछ । पूर्वतिर मूलगेट हुने पोखरी प्रवेश गर्न तीनवटा प्रवेशद्वार बनाइने योजनाअनुरुप काम भइरहेको छ ।
Last Updated on: March 12th, 2021 at 8:08 pm